War - Hargab ama COVID-19? Qalabkayaga baaritaanka ee Multiple PCR ayaa kaa caawin kara inaad kala soocdo
Hargab ama COVID-19? Qalabkayaga baaritaanka ee Multiple PCR ayaa kaa caawin kara inaad kala soocdo
Calaamadaha COVID-19 iyo hargabku waa isku mid, sidaa darteed aqoonsi sax ah ayaa loo baahan yahay
Laga soo bilaabo Diseembar 2019, cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' (2019-nCoV / SARA-CoV-2) wuxuu ku sii faafayaa adduunka. Soo ogaanshaha saxda ah iyo ogaanshaha dadka cudurka qaba ama sidayaal waa muhiim muhiim iyo muhiimad u leh xakamaynta cudurka faafa. Intaas waxaa sii dheer, xilliga hadda lagu jiro waa dhacdooyinka sare ee hargabka kala duwan ee A virus 、 influenza B virus iyo infekshannada kale ee la xiriira fayraska. Tilmaamaha caafimaad ee cudurka cusub ee coronavirus iyo astaamaha hore ee infekshinka fayraska hargabku aad ayey isugu egyihiin. "Qorshaha Ka Hortagga iyo Xakamaynta Hargabka Qaranka ee Shiinaha (Nuqulka 2020)" wuxuu si cad u tilmaamay in baaritaan adag iyo kala soocid adag, iyo kor u qaadista wadajirka ah ee lagu ogaanayo cuduro fara badan oo neefsashada keena, taageeridda isku mar ogaanshaha cuduro fara badan gaar ahaan baaritaanka kaladuwan ee cusub. coronavirus iyo hargabka A / B virus. .
COVID-19 + Flu A / B Qalabka baaritaanka PCR oo ay soo saartay CHK Biotech
Maalmahan, dareenka weyn ayaa la siiyay baaritaanka cudurada kale ee neefsashada caadiga ah marka laga reebo coronavirus cusub. Si kastaba ha noqotee, astaamaha uu keeno hargabka A / B fayraska waxay la mid yihiin astaamaha caafimaad ee cudurka cusub ee coronavirus. Inta lagu guda jiro xaqiijinta bukaanka qaba cudurka oof-wareenka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' ama bukaano looga shakisan yahay, waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo suurtagalnimada infekshannada kale (gaar ahaan hargabka A iyo hargabka B) si loo fuliyo kala sooc caafimaad oo sax ah, go'doomin iyo daaweyn waqtigeeda, taas oo ah a dhibaato weyn in lagu xalliyo xaqiiqda caafimaad. Sidaa darteed, CHK Biotech waxay soo saartay xirmada baaritaanka badan ee COVID-19 / AB si loo xalliyo dhibaatadan. Qalabku wuxuu qaatay waqtiga dhabta ah ee habka PCR si loo ogaado saddexda fayras si loo baaro loona kala saaro bukaanada COVID-19 iyo bukaanada hargabka, waxayna door wanaagsan ka ciyaari kartaa ka hortagga iyo xakameynta COVID-19.
Faa'iidooyinka sheygan: dareenka sare; isla mar ahaantaana la ogaado 4 bartilmaameed, oo daboolaya coronavirus cusub, hargabka A, hargabka B, iyo hidda-socodka xakamaynta gudaha oo ah tayada xakamaynta inta lagu jiro dhammaan hawsha tijaabada, taas oo si wax ku ool ah uga fogaan karta natiijooyinka xun ee been abuurka ah; ogaanshaha degdegga ah ee saxda ah: Waxay qaadataa oo keliya 1 saac iyo 30 daqiiqo laga soo qaado ururinta muunadda illaa natiijada.
Kordhinta qalooca cusub Fayruuska corona/hargab A / B saddex reagent ogaanshaha reagent
Cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus epidemic' wuxuu wali ku jiraa heer muhiim ah oo ka hortag iyo xakameyn ah. Waxay wajahaysaa arrimo saameynaya isbedel, Habkayaga kahortaga iyo xakamaynta, hababka ogaanshaha, iyo qaababka ogaanshaha ayaa sii wadaya soo bandhigida shuruudo sare .CHK Biotech waa ganacsi nafleyda ah waxayna had iyo jeer geesinimo uqaadataa masuuliyadaha bulshada. Waxaan si joogto ah uga gudubnay dhibaatooyinka xagga farsamada ah waxaanna sii wadnay soo saarista alaabooyin cusub oo la xiriira ogaanshaha fayrasyada cusub ee loo yaqaan 'coronavirus virus'.
Waxaan fahamsanahay in kaliya geesinimada wax qabashada aan ku sii wadi karno koritaanka; kaliya hal-abuurnimo joogto ah ayaan ku guuleysan karnaa mustaqbalka. Waqti kasta, CHK Biotech waxay isticmaashaa "xariifnimo" iyo "hal-abuurnimo" si ay u nadiifiso alaabteeda una adeegto sayniska Nolosha, goobaha baaritaanka
Waqtiga boostada: Mar-12-2021
Shanghai Chuangkun Bio waxaa ka go'an inay keento teknoolojiyad cusub oo lagu baaro cilmiga jirka si ay uga faa'iideysato caafimaadka dadka oo dhan loona hubiyo badqabka cunnada loona faa'iideeyo bulshada.
Cinwaanka: Qolka 802, Dhismaha 1, No.69 Yuanfeng Wadada, Degmada Baoshan, Shanghai, PR.China
CHKBiotech waxay si guul leh u soo saartay baaris ...
Hargab ama COVID-19? Our Multiple PCR ...
Lyophilized taaj nucleic acid reagen ...